Jose Mourinho oo iska diiday inuu ka hadlo hadal uu sheegay Pogba, kadib guuldaradii Brighton – Gool FM
Jose Mourinho oo iska diiday inuu ka hadlo hadal uu sheegay Pogba, kadib guuldaradii Brighton
(Manchester) 24 Agoosto 2018. Macalinka kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa iska diiday inuu ka hadlo hadalada lacibkiisa khadka dhexe ee Paul Pogba, kadib guuladaradii kasoo gaartay kulankooda labaad horyaalka Premier League ee kooxda Brighton.
Mourinho ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka Tottenham Hotspur ee horyaalka Premier League ay habeenka Isbiinta soo aadan ku wada ciyaari doonaan wuxuuna ka hadlay dhowr arimood.
Paul Pogba ayaa kadib guuldaradii kasoo gaadhay kulankii lasoo dhaafay kooxda Brighton, wuxuu sheegay in laga bilaabo isaga iyo sidoo kale saaxiibadiis aysan si wanaagsan u ciyaarin, taasna ay sabab u noqotay in lagu ciqaabay qaladaadkii ay sameeyeen.
Hadaba macalinka reer Portugal ayaa iska diiday in shirkiisa jaraa’id uu kaga hadlo hadalka Pogba kadib markii wax laga weydiiyay.
“Pogba ayaa sidaas yiri, isaga ayaana laga rabaa inuu ka jawaabo, hadii aad rabto wax faahfaahin ah ee ku saabsan erayada Pogba, waa inaad u timaado isaga oo aad waydiiso”.
Ernesto Valverde oo daboolka ka qaaday fikirka ay kooxda Barcelona ka qabto iibinta Ivan Rakitić